Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Warshadaha Dalxiiska oo Xusay Sanad -guuradii Afraad
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Entertainment • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles waxay u dabaaldegtaa Maalinta Dalxiiska Adduunka
Maalinta Dalxiiska Adduunka ee sannadkan ayaa lagu xusi doonaa gudaha iyada oo halku -dhiggeedu yahay “Qaabaynta Mustaqbalkeenna” Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, ayaa ku dhawaaqday shir jaraa’id oo ay qabatay Isniintii, Sebtember 20, 2021, oo lagu qabtay Guriga Botanical. Bandhiggan oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa la qaban doonaa laga bilaabo Sebtember 27, 2021, illaa Oktoobar 2, 2021. Mawduuca “Qaabaynta Mustaqbalkeena” ayaa loo doortay in uusan u sacab tumin waxtarka kuwa ka shaqeeya warshadaha laakiin sidoo kale dadka Seychelles iyo meel loo socdo.
Mawduuca waxaa loo doortay in lagu bogaadiyo waxtarka ay leeyihiin kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo sidoo kale dadka Seychelles iyo halka loo socdo.
Dabaaldegga Dalxiiska waxaa ku jiri doona cinwaanka Wasiirka Dalxiiska, oo daaha ka rogi doona dadka lagu sharfayo “Hormuudka Dalxiiska.”
Carruurtu waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan markay wareysanayaan shakhsiyaadka dalxiiska.
Mawduuca “Qaabaynta Mustaqbalkeenna” ayaa loo doortay inaanay u sacab tumin wax -ku -oolka kuwa ka shaqeeya warshadaha laakiin sidoo kale dadka Seychelles iyo halka loo socdo marka ay Waaxda Dalxiisku u dhaqaaqdo sidii bulshada iyo degmooyinku uga qayb qaadan lahaayeen warshadaha dalxiiska. Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO) ayaa lagu qabtaa adduunka oo dhan iyada oo halku -dhig looga dhigay “Dalxiiska Kobaca Loo Dhan Yahay.”
“Festifaalka Dalxiiska ayaa noo ah waqti gaar ah maadaama aan waqti ku qaadanno kaliya inaan u dabaaldegno ganacsigeenna iyo meesha aan u soconno laakiin aan sidoo kale ka fikirno xaaladda warshadahayaga,” ayuu yiri PS Francis markii ay soo bandhigaysay jadwalka dhacdooyinka si loo xuso dalxiiska sannadlaha ah. toddobaadkii.
Kuwan waxaa ka mid noqon doona cinwaan uu Wasiirka Dalxiiska Sylvestre Radegonde u jeedin doono Golaha Qaranka, soo bandhigida dadka lagu sharfayo “Horjoogayaasha Dalxiiska”, taxane muuqasho iyo doodo ku saabsan barnaamijyada muhiimka ah ee raadiyaha, telefishanka, iyo baraha bulshada ee ku lug leh tirooyinka warshadaha ee muhiimka ah iyo bilaabida tartan sawir qaadis ah iyo kuwo kale. Carruurtu waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan markay wareysanayaan shaqsiyaadka dalxiiska kanaalka YouTube ee waaxda dalxiiska.
Sannadkan cusubi waa hawl saamayn leh oo ah qaab geed -beeris, kaas oo la qaban doono Oktoobar 2, 2021. PS Francis wuxuu sheegay in dhacdadani ay sii xoojinayso ballan -qaadkii loo socday ee ku aaddanaa joogtaynta iyo dadaalladeeda ah inay sii ahaato meel cagaar ah. Xubnaha Seychelles bulshada waxaa lagu casuumay inay ka taageeraan hawshan meel fog ururada iyo xaafadaha dhexdooda iyagoo geed beeraya.
PS Francis waxay muujisay sida ay uga xuntahay in xaaladda jirta ee masiibada awgeed, dadweynuhu aysan awoodi doonin inay si shaqsi ah uga qaybgalaan waxqabadyada, dhacdooyinkana waxay noqon doonaan mid lagu casuumo kaliya ka -qaybgalayaasha xaddidan ama lagu qabto internetka.
“Waxaan dib u dhignay waxqabadyadeena marka la eego tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha ee jira. In kasta oo ay jiraan xannibaadyo, waxaan ku qanacsanahay in dhacdooyinkayagu ay ka muuqdaan waxqabadyo waxbarasho si ay uga qaybqaataan dhallinyaradeenna iyo dhacdooyinka waara si aan u sii wadno dadaallada aan ku doonayno inaan cagaar cagaar ku dhigno, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Dadweynaha ayaa sidoo kale awoodi doona inay ku raaxeystaan ​​waxqabadyo kale oo fog oo ay ka mid yihiin dood wadareed iyo Concours d'Expression Orale oo ay sameeyaan carruurta iskuullada maadaama dhacdooyinka si toos ah loo baahin doono ama la baahin doono. Iyada oo waxoogaa isbeddel ah lagu samaynayo dhacdada, fiesta cuntada ayaa mar kale lagu soo bandhigi doonaa barnaamijka sannadkan iyada oo la -hawlgalayaasha dalxiisku ay martigelin doonaan dhacdooyinka dhismahooda.
Dabaaldegga Dalxiiska ee sannadlaha ah waa kordhinta Maalinta Dalxiiska Adduunka ee sannad kasta la xuso 27 -ka Sebtember oo ay bilowdo Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO).